UJudith Kerr, uMlobi xa uHitler Wawubamba uMvundla oPinki, usweleka | Uncwadi lwangoku
UMariola Diaz-Cano Arevalo | | Ababhali, Iincwadi zoLutsha, Izaziso
Ifoto kaJudith Kerr: (c) uChristoph Rieger.
Kwakusezintsuku ezimbalwa ezidlulileyo kwaye iindaba zandenza buhlungu. UJudith Kerr uswelekileUmbhali we Xa uHitler weba uMvundla oPinki, Enye yezo noveli izikhombisi zoncwadi lwabantwana nolutsha kwaye isekwe kumava akho obomi. Ithunyelwe kwi 1971Bandinike yona kwi-80s kwaye ndisayigcina imvakalelo xa ndiyifunda. UKerr Ndandineminyaka eyi-95 kwaye ubushiya ngasemva ubomi lo gama nje ubutofotofo kwimisebenzi yabafundi abancinci. Oku yi uphononongo.
1 UJudith Kerr
2 Imidlalo eyaziwayo
2.1 Ingwe eze kusela le ti
2.2 Xa uHitler weba uMvundla oPinki
2.3 UMog, ikati engaziwayo
Ube ngomnye wababhali baseBritane kunye nemifanekiso Uncwadi lwabantwana oluthandwa kakhulu e-UK. Kodwa uJudith Kerr wazalelwa eBerlin ngo-1923. Ekunyuseni kukaHitler kulawulo, uKerr kwafuneka basabe eJamani kwii-30s zokuqala. Imeko yamaJuda katata wabo, umbhali, umgxeki kumdlalo weqonga kunye nomlobi wemihlathi u-Alfred Kerr, kunye nokuma kwabo ngokuchasene nolawulo kwababeka ebaleni kwaye lipolisa elabalumkisa ukuba bahambe.
Bafike kuqala ku ESwitzerland, emva koko eParis kwaye bagqibela ngokufudukela e Londres. Apho, akazange akwazi ukufunda kwiDyunivesithi yaseCambridge njengoko wayefuna, ke wagqiba kwelokuba enze njalo iikhosi zokuchwetheza kwaye kananjalo ukunceda amajoni enzakeleyo yeMfazwe yesibini yeHlabathi kwi OMvulo. ndiyathatha iiklasi zokuzoba emva koko ndafumana beca weSikolo soBugcisa. Xa watshata washiya yonke into kwaye waye zinikezelwe ekhaya nakusapho.
Kwakusekuhambeni kwexesha apho uJudith Kerr wasungula ibali labantwana bakhe ababini awayebabiza ngalo Ingwe eze kusela le ti. Kwaye yayingowakhe Ukuqala kokubhala ngo-1968. Ukusuka apho, umsebenzi wakhe wemka waya kuqhubeka esinye isiqingatha senkulungwane.
En 2012 bamnika i Umyalelo woBukhosi (eziswe nguKumkanikazi uElizabeth II) ngembeko yeenkonzo zakhe ku uncwadi lwabantwana kunye nemfundo ngaye Ukubulawa kwabantu ngenkohlakalo. Kwaye kwiintsuku nje ezimbalwa ezidlulileyo wabhiyozela ukukhetha kwakhe njengo umzobi wonyaka kumabhaso Amabhaso eBritish Book.
Ingwe eze kusela le ti
Kwezona zininzi ethandwayo, exabisekileyo kwaye ithengiswe Kule minyaka ingamashumi idlulileyo kumazwe amaninzi, le ncwadi sele ingu iklasikhi yanamhlanje kwizizukulwana ezininzi zabafundi. Libali le ingwe ebawayo kakhulu ephazamisa iti kunye nokutya okuncinci kwentombazana kunye nonina, kodwa iphele itye ipryry yonke kwaye isele kwanamanzi avela kwimibhobho ngaphambi kokunyamalala.
Xa uHitler weba uMvundla oPinki
Mhlawumbi umsebenzi wakhe aziwa kakhulu kwaye ayaziwa, kunye neempembelelo zemvakalelo kunye novakalelo. Ukufika kukaHitler Emandleni aya kutshintsha ngokupheleleyo ubomi be UAna nentsapho yakhe. Uyise kufuneka aye elubhacweni eSwitzerland kwaye uAnna, umama wakhe kunye nomntakwabo bamlandela kwiintsuku ezimbalwa kamva. UAnna ushiya umvundla wakhe opinki, kuba ayihlali kwisutikheyisi kwaye igqiba kwelokuba ikhethe enye into yokudlala nangona kamva iyakuyiphosa. Oko kuya kushiyeka kuya kuba ebuntwaneni bakhe.
Esi sihloko ngowokuqala kwi-trilogy. Balandela Imfazwe yaseBritane, icandelo lesibini lebali, apho intombazana encinci UAnna uhlala eLondon ye-Blitz Kwaye ngoku ukwishumi elivisayo onokuthi, kwiingxaki zobudala bakhe, ongeze oko kokuhlala esixekweni emfazweni kunye neengxaki zemali zabazali bakhe. Kwaye isahlulo sesithathu, Umntu omncinci ukude
, ongafikanga apha kwaye esele sinayo UAna omdala ohambela eJamani emva kwemfazwe emva kokubulala umama wakhe.
UMog, ikati engaziwayo
Ukusuka kwindalo yakhe yakutshanje, ikati kaMog ihlala nayo usapho lakwa thomas omkhathaleleyo kwaye umthanda kakhulu, ngaphandle kwengxaki yakhe: ulibale yonke into. Kodwa ngenye imini iimpazamo zakhe ziya kuba nexabiso kakhulu, kuba xa wayesiya egadini ukuzama ukubaleka, wayesaziubanjisiwe. Xa ufuna ukugoduka, sebenzisa ithuba ukubonakala kwendoda ezinzulwini zobusuku ekhitshini kwaye UMog meows engayeki ukubanga ingqalelo yakho. Kodwa into ayifumanayo yile ndoda, isela, banjwa.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Uncwadi lwangoku » Iincwadi » Ababhali » UJudith Kerr, umbhali xa uHitler Wawubamba uMvundla oPinki, wasweleka
UJules Bonnot, Umqhubi wenqwelo-mafutha kaConan Doyle, Wayengomnye waBaphuli-mthetho Abatshutshiswa EFrance